A ezihlukahlukene ongakhetha mortgage ku "Savings Bank" ikuvumela ukuthi ukhethe loan kangcono isakhamuzi ngasinye. Lolu hlobo abolekise has a plus elikhulu, ibhonasi, ngomqondo ongokomfanekiso.
Mortgage "Sberbank", ukubuyekezwa okuyinto olunikezwa nezinye izikhungo, kungenziwa kuzwiwe yonke indawo, ihlukile kwezinye izinhlelo. IKhomishana akuyona, futhi ukukhokhelwa sokuqala% 10 kuphela. Akunandaba ukuthi it is refinancing loan ekhaya noma ukuthenga indawo entsha. Lesi sici kubalulekile esivela credit zinhlobo ngamunye. Kodwa uyini ngokoqobo?
Mortgage credit ku "Sberbank" Kulula ngokwanele ukuze uthole, nje kudingeka alethe isitatimende engenayo on Ifomu PIT-2 bese ukhokha 10% intengo. Ngaphezu kwalokho, ibhange inikeza ukubolekisa ngokuthenga impahla eRussia nakwamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, uhlobo lwemali imalimboleko kungaba kokubili kazwelonke angaphandle.
Kukhona uhlobo mortgage boleko "Mortgage +". Lolu khetho kuzokuvumela izimo ezikahle kakhulu ukuthenga efulethini entsha. Njengoba ubusa efulethini zingathengwa kuphela komunye lonjiniyela, okuyinto ngokwayo wathatha credit ukuze kwakhiwe izindlu ezintsha. Lokhu singasho sithi kokubili plus (rate on loan buzoba buncane kunokujwayelekile), futhi embi ngalo (izindlu kuzoba endaweni ethize) lokhu uhlobo mortgage. Ngakho-ke, ngaphambi ngokujabula usayine inkontileka, kungcono ukuzwa imibono kakade isihambile Kulokhu abantu wazi ngokuzibonela ukuthi yini "i-mortgage " Sberbank "(ukubuyekezwa kwawo kuyoba usizo). Futhi kungaleyo ndlela kuphela uqhubekele yokubhalisa kwemibhalo.
"Ukulondoloza": mortgage "umndeni Young"
Ezikhanga kakhulu mortgage obolekisayo - uhlelo "umndeni Young". Kule nkathi umboleki akumelwe ube neminyaka engaphezu kuka-35. Le mfuneko ubeka "Sberbank". Mortgage intsha futhi kusho imfuneko - ukuba khona komshado kubhaliswe. Buhle lolu hlobo loan ukuthi imali zemindeni abasha kubhekwa, kanye engenayo yabazali babo, okuyinto lula kakhulu isimo. Abazali ukwenza njenge-co-ababoleka, futhi lokhu kwandisa amathuba okuthi athole indawo. Uma umndeni osemusha ingane encane, inani inkokhelo kungaba njengoba low 5%.
Mortgage "Sberbank": amazwana netiphetfo
Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi, naphezu Izibuyekezo rave ezivela ababoleka eziningi eyathatha mortgage ku "Savings Bank", lapho kwadingeka inezici ezithile ezingathandeki.
Lezi zihlanganisa, njalo okwesikhathi eside okulindelwe isinqumo isiqondiso yasebhange: kungaba ukufinyelela ngenyanga noma ngaphezulu. elithi loan ngokuvamile esiphezulu plus izinga langempela ku loan, uzobe eyaziwa kuphela uma ukusayina inkontileka. Lokhu kungenxa yokuthi ubukhulu izinga isethwe ngokuzikhethela ukuphathwa yebhange. Izinzuzo, njengoba kushiwo ngaphambili, ongaphakeme yokukhokha phansi hhayi sikhulu kakhulu, uma kuqhathaniswa nezinye izinhlelo mortgage, zenzalo.
Ukuze ukubone ngokuthe ngqo yonke izinhlobo ezihlongozwayo ukubolekisa, udinga kuphela ukufunda nabo kuwebhusayithi yebhange, baqoqe kakhulu ngesihloko esithi "mortgage" Sberbank ": Izibuyekezo nemibandela", noma iya yimiphi ihhovisi layo futhi uthintane nge onguchwepheshe.
Uchungechunge lwezihloko ezithi "Red Queen": incazelo, umqondisi, abadlali kanye izindima
Rocker inkinobho - tesakhiwo, ezihlukahlukene
Kanjani ukulungisa iphutha "iphakethe lwefayela olungavumelekile"